Fiete Choice, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra | Vaovao IPhone
Fiete Choice, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Rehefa manakaiky ny vanim-potoanan'ny Noely dia mihamaro hatrany ireo mpamorona manolotra ny fangatahany ho an'ny ankizy kely ao an-trano maimaimpoana. Andro vitsivitsy lasa izay dia nampahafantatra anao momba ny lalao izahay Buenas noches y Siria alina!, fampiharana sasany, mihoatra ny lalao, natao hanampiana ny zaza hatory. Ankehitriny dia anjaran'ny lalao Fiete Choice, anarana iray tsy tena manome antsika ny famantarana ny zavatra avelany hataontsika. Fiete Choice dia lalao iray izay tsy maintsy hiarahan'ny ankizy kely amin'ny tantsambo Fiete amin'ny diany mihoatra ny ambaratonga 99.
Fiete dia lalao iray izay tsy maintsy hanombohan'ny ankizy kely mampiasa lojika hamahana ireo olana samihafa izay ho hitantsika mandritra ny ambaratonga rehetra. Raha ohatra ka misy andian'ondry ohatra dia mahita fefy isika, lojika fa tsy mety ny fefy ary ilay biby no niditra tao amin'ilay andiana. Rehefa mandroso amin'ny ambaratonga isika, ny manaraka dia mifandraika amin'ilay teo aloha hatrany, mba ho mora kokoa ny mampihatra lojika an'ireo zanatsika.
Misaotra ny Fiete Choice, ny zanatsika dia mampiasa ny fahaizany mifantoka, ny fisainana lojika ary ny fahitany ny mason-tsainy, ny lafiny lehibe raha ny amin'ny fakana, ny fanodinana ary ny fitahirizana vaovao. Ireo antony ireo dia misy ifandraisany amin'ny famakiana sy ny fanoratana ihany koa. Ity lalao ity dia novolavolaina tamin'ny fiaraha-miasa akaiky amin'ireo mpanabe sy ny ray aman-dreny, noho izany tsy lalao tsotra handany fotoana izany, fa rehefa miala voly izy ireo dia mianatra miaraka amin'izay.
Fiete Safidy fiasa
Maherin'ny 99 ny ambaratonga mahafinaritra sy isan-karazany
Fanatanjahan-tena lojika sarotra hamahana sy hanapotehana ny lohanao
Maody lalao roa
Fomba fitsapana fotoana
Sary noforonina tamim-pitandremana
Fahafinaretana sy fianarana
Vokatry ny feo mahafinaritra
Rafitra fanehoan-kevitra mivantana sy mazava
Fiete Choice dia manana vidiny mahazatra ao amin'ny App Store 2,99 euro, fa mandritra ny fotoana voafetra dia azontsika atao ny misintona azy maimaim-poana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » App store » Fiete Choice, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Nilaza i Tim Cook fa tena lafo ny Apple Watch
Ny fampandehanana Chrome amin'ny fikarohana amin'ny feo na amin'ny fomba fanamoriana dia azo atao avy amin'ny Spotlight